Ukujonga izigidi zeedola iflethi okanye indlu ekwicomplex Hvar - I-Airbnb
Ukujonga izigidi zeedola iflethi okanye indlu ekwicomplex Hvar
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAnte & Vicky
UAnte & Vicky yi-Superhost
Jonga uphononongo lwethu luthetha yonke into !!!! Imboniselo, indawo -5*****
Jonga indawo yethu entsha: http://abnb.me/EVmg/iD5lPldczD
Yindlu entsha enembono entle, indawo emangalisayo!
-Ukuhamba ngenqanawa ngasese (yacht yakho)
-Itheko le-Bachelor, itheko lomtshato okanye ukudubula kwefoto
-Ukudluliselwa kwisikhululo seenqwelomoya
kwi-40' entsha, i-500hp, entsha, i-yacht yesimbo saseVan Dutch kunye nomphathi, umamkeli, ibha, i-wifi, umculo, indlu yangasese, yonke into oyifunayo ngosuku olugqibeleleyo!
Igumbi lokujonga isigidi seedola likunika indawo ekhethekileyo yokuhlala, ububele kunye nendawo yokuba sembindini wayo yonke imisebenzi, iminyhadala kwaye kwelinye icala ukuba noxolo kwaye ukonwabele iStunning Scenery ukusuka kwibalcony yakho, iilwandle kunye nendalo entle.
Kuthatha kuphela imizuzu eli-15 ukuhamba kunye ne-promenade entle ehamba ecaleni kwamanzi ukuya kumbindi wedolophu. Kwelinye icala iilwandle ziphantsi kwendlu nje kunye nemivalo yaselwandle kunye nezinye izinto ezininzi zokuzonwabisa.
Kananjalo kubaluleke kakhulu ukukhumbuza ukuba yindlu entsha ngokupheleleyo.
I-Apartmet inegumbi elinye kunye negumbi elinye elongezelelweyo lokubhabha oya kubona kwimifanekiso ukuba yintoni kanye kanye. Kwaye kunye negumbi lokuhlambela elihle ngokwenene elinegumbi lokuhlala elikhulu nelikhethekileyo.
Ukusuka kwibalcony unombono omangalisayo weHvar Chanel.
Ufumana ngaphandle kwentlawulo:I-intanethi engenangcingo, ukuba ukwi-Hvar okokuqala okanye awuqinisekanga ukuba ungaya phi siza kukuthatha ngesikhephe, iitawuli.Imeko yomoya, intsimbi. Umlandeli
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo eyongezelelweyo kwamkeleka ukuyibuza, sikulungele ukukuphendula kulo naluphi na uhlobo lombuzo, vele uqhagamshelane nathi.
4.93 · Izimvo eziyi-259
Ubumelwane buhlala kunye neevillas ezininzi ezincinci ukuba zingangxoli kwaye zihlala zimnandi.
Uninzi lweelwandle zeHvar zingaphantsi nje kweflethi
ISupermarket yimizuzu emi-3 ukusuka endlwini ...
Umbuki zindwendwe ngu- Ante & Vicky
Ujoyine nge- 2011 Matshi
Izimvo eziyi-1 138
Hello we are Ante & Vicky... we have couple of apartments in our own house and in our parents house... we both have economic’s degree, love to travel and have two small childrens: Angela Pia and Luke.
For any kind of information please don't hesitate to contact us.
Hello we are Ante & Vicky... we have couple of apartments in our own house and in our parents house... we both have economic’s degree, love to travel and have two small childre…
Sizama ukufumana ibhalansi ukuze singaphazamisi kodwa sibekho ngalo lonke ixesha xa uncedo lwethu lufuneka.